धरानमा स्कुल खुल्लान् ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानमा स्कुल खुल्लान् ?
धरानः देशभर मङ्सिरदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने वा नहुने अर्थात् शैक्षिक सत्र खेर जाने हो नजाने हो सबैमा चासो र चिन्ता छ ।
तर पनि विद्यालय खुल्लान् भन्नेबारे अझै ठोस निर्णय आउन सकेको छैन । खासगरी शिक्षालयहरू बन्द हुँदा लाखौं बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले लामो समयसम्म बन्द विद्यालय सञ्चालनको बाटो खुला गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को जोखिम नभएका र कम हुँदै जाने स्थानीय तहका विद्यालयमा आलोपालो सिफ्ट वा उपयुक्त विधि अपनाई पठनपाठन सञ्चालनको बाटो खुलाइदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २२ गतेको बैठकले ‘कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले कार्यढाँचा वेबसाइटमा समावेश गरी स्थानीय तहलाई जोखिमको मूल्यांकन गरी क्रमशः विद्यालय खोल्न मार्गदर्शन गरेकोे छ ।
यसअघि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरु बन्द गरेको थियो । अब संक्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरी विद्यालय बन्द गरिराख्ने कि खोल्ने भन्ने निर्णय स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्नेछन् । स्थानीय सरकारहरुले अब एकै समयमा सबै कक्षा वा अलग–अलग समयमा अलग–अलग कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । कक्षा अवधिको समय छोट्याउने र हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि दिइएको छ । विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय सञ्चालन एवं शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन तथा स्थगित परीक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने मूलभूत कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
के गर्दैछ धरान उपमहानगरपालिका ?
धरानका स्कुल खोल्नेबारेमा अन्यौलता कायमै छ । धरान उपमहानगरपालिकामा यसअघि पनि विभिन्न ‘मोडालिटी’ मा विद्यालय सञ्चालनबारे कुरा नउठेको होइन ।
धरान उपमहानगरपालिकामा बनाइएको सुझाव कार्यदलले कक्षा–८ देखि १० सम्म परीक्षणका रुपमा स्कुल चलाउन भन्दै सुझाव दिएपनि कोरोना संक्रमित बढेसँगै त्यो समेत कार्यान्वयन भएन । त्यतिबेला सुझाव कार्यदल, शिक्षक, स्कुल सञ्चालक, विज्ञ समूह, शिक्षाविद्ले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरयाएर दशैं, तिहार र छैठपछि स्कुल सञ्चालन गर्न सुझाएको थियो ।
यद्यपि कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन् भने कतिपयले चलाएकै छैनन् । धरान उपमहानगरपालिका सिकाइका वैकल्पिक विधिबारे आ–आफ्नो अनुकूल हुने सुझाव अभिभावक र शिक्षकबाट आउन थालेपछि कुन विधि उचित हुन सक्छ भन्नेमा टुङ्गो लगाउन अलमलकै अवस्था छ ।
चाडबाडका कारण स्कुल खोल्ने वा नखोल्नेबारे केही छलफल नभएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कटुवालले बताए । ‘स्कुल खुल्न थालेपछि हुम्लामा ३२ जनासम्म विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण फैलिएको पुष्टि भयो’, उनले भने, ‘हाम्रोमा अहिलेको संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, सबै कुरा हेरेर निर्णय हुन्छ ।’
उनले विज्ञ समूहलगायतसँग पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणसम्मको छलफलपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने बताए । ‘खासमा सरकारले विद्यालय सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको छ, हामी पर्ख र हेरकै स्थितिमा छौं तर पनि संक्रमणको अवस्था अझै बढ्ने भयो भने तत्काल स्कुल खुल्दैनन् ।’ उनले चाडबाड सकिएको र आइतबारबाट केही छलफल चलाइने बताए ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले छलफलबाटै निर्णय गरिने बताए । ‘हामी छलफलबाट समस्याको समाधान निकाल्छौं अनि स्कुल खोल्नेबारे मोडालिटी तयार गछौैं ।’
गत असोज २२ को निर्णयका आधारमा सरकारले सबै तहका परीक्षा सञ्चालनको कार्य शुरु गरिसकेको छ । यही मङ्सिर ९ गतेदेखि कक्षा–१२ को गत वर्षको परीक्षाको ४० नम्बर प्राप्ताङ्कका लागि प्रत्यक्ष परीक्षा हुँदैछ । सो परीक्षामा विद्यार्थीलाई जहाँ रहेको छ त्यहीँको विद्यालय (होम सेन्टर) का रूपमा पनि परीक्षामा सामेल गराउने तयारी छ ।
धरानमा के छ स्वास्थ्य स्थिति ?
धरान उपमहानगरपालिकामा अहिले पिसिआर परीक्षण रोकिएको छ । चाडबाडका कारणले पिसिआर परीक्षण रोकिएको हो । उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले भोलिदेखि पिसिआर परीक्षण थालिने बताए । धरानमा अहिले संक्रमितको संख्या घट्दो रहेको उनले बताए ।
‘यसअघि पिसिआर परीक्षणको स्थिति हेर्दा १०० जनामा परीक्षण गर्दा ६० देखि ७० प्रतिशतमा पोजेटिभ रिपोर्ट आउँथ्यो तर अहिले १०० जनामा परीक्षण गर्दा १५ देखि २० प्रतिशत पोजेटिभ रिपोर्ट आउन थालेको छ ।’ उनले भने । उनले बीपी प्रतिष्ठानमा परीक्षण गराउने अधिकांशको पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आएको पाइएको जानकारी दिए । ‘कोरोना जस्तै लक्षण देखिएका (ज्वरो, रुघाखोकी आदि) मा पनि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ नै आइरहेको छ’, उनले थपे, ‘यो मौसमी फ्लुको कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।’
उनले धरानमा कोरोना संक्रमित घटबढकै स्थितिमा रहेको बताए । ‘यसअघि देशभर संक्रमित देखिरहँदा धरानमा संक्रमण देखिएन तर एक्कासी केही महिनाअघिदेखि संक्रमितको संख्या एक्कासी बढ्यो तर अहिले घटेको स्थिति छ, तर बढ्न पनि सक्छ ।’